Ny tantara foronina tsara indrindra
Famerenana ireo tantara nentim-paharazana
The Fashion House, nataon'i Julia Kröhn
Ao anatin'ny promo ho an'ity tantara ity dia voalaza fa ny ratram-pony dia nahasarika ny iray amin'ireo mpanoratra nalaza tamin'ny fomba tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo nateraka izay mamaly ny tsiron'ny mpamaky melankolika sy ny antony mandroso toy ny vehivavy. Mety ho lasa tia an'ity asan'ny ... i Anne Jacobs ity ...
Manandrana indray ireo revolisionera, nataon'i Mauro Javier Cárdenas
Ny novel dia azo ampiasaina amin'ny fomba lavorary hahafantarana toerana tena voafaritra na firenena iray manontolo. Tolo-kevitra fitantarana miaraka amin'ny fikasana hanakaiky kokoa ny tontolo iainana iray, manome anao ny foto-kevitr'izay nipetraka tao amin'io toerana io. Mety ho toa truism izany, saingy misy ifandraisany betsaka amin'ilay hevitra. Amin'ny farany, …
Ny maro, nataon'i Tomás Arranz
Ny boky mampiala voly sy mamboly dia tsy maintsy jerena manokana. Izany no tranga amin'ity tantara ity The maro. Amin'ny sambo dia tsy ela aho dia nahita fandikan-teny maro momba ny lohatenin'ilay boky (foto-kevitra mandrakariva aorian'ny famakiana mahafaly). Satria misy dikany ara-materialy ny lohateny izay tsy ho ela ...
Biraon'ny dobo sy zaridaina, nataon'i Didier Decoin
Odyssey vehivavy any Japon taonjato faha-XNUMX. Ny famintinana hentitra an'ity tantara ity dia miharihary amin'ity fehezanteny tsotra ity. Ho avy ny tohiny…. Didier Decoin dia nandray am-pitandremana ny fanoratana an'ity tantara ity (araka ny tokony ho izy, mazava ho azy) Maherin'ny folo taona natokana ...
Fianakaviana tsy tanteraka, avy amin'i Pepa Roma
Ity novela ity dia natolotra antsika ho toy ny novelom-behivavy. Saingy tena tsy ekeko izany marika izany. Raha raisina toy izany izy satria miresaka momba ny mety ho matriarchy izay nitahiry ara-tantara ny tsiambaratelon'ny fianakaviana sy manafina ny fahorian'ny varavarana ivelany dia tsy misy dikany izany. Tsy misy …
Tantaran'ny fahafates mialoha, nataon'i Gabriel García Márquez
Dishonor, lalàna tsy voasoratra, pacte de fanginana, fanisana ary fanaintainana noho ny famoizana olon-tiana iray. Fantatry ny rehetra fa tsy misy manameloka. Am-bava fotsiny, ho an'ireo izay te-hihaino dia ambara indraindray ny marina. Fantatry ny rehetra fa ho faty i Santiago Nasar, afa-tsy i Santiago tenany ihany, izay tsy mahalala ny fahotana mahafaty nataony teo imason'ny hafa.
Azonao atao izao ny mividy Chronicle of a Death Foretold, ilay tantara fohy tokana nataon'i Gabriel García Márquez, eto:
kitiho ny boky
Eny ankalamanjana, nataon'i Jesús Carrasco
Tonga teny an-tanako io ho fanomezana avy amin'ny namana tsara iray. Ny namana tsara tsy mba mahomby amin'ny tolo-kevitra momba ny haisoratra, na dia tsy dia mifanaraka amin'ny andalana mahazatra anao aza izany ... Ny zaza iray dia mandositra zavatra iray, tsy fantatsika hoe inona marina. Na eo aza ny tahotra ny fandosirana mankaiza, fantany fa manana ...